Imithandazo emi-3 enamandla yokufumana umsebenzi wakho ?
Imithandazo enamandla ye-3 yokubuyisa umsebenzi. Umsebenzi usoloko ungunobangela wokuxhalaba, kwanabo baphulukene nomsebenzi abawuthanda kakhulu. Umbuzo "kodwa ndikone ngantoni?" Ayisiweli ezingqondweni zethu kwaye sithandabuza amandla ethu. Kodwa inyani yile, ihlala ibangela ukuba u-layoff angabinanto yakwenza nawe kwaye yenzeke ngezizathu ezingaphaya kolawulo lwakho. Iskena sinzima kwaye kunzima ukusiqhelanisa, ke sifuna ukukunika amandla amancinci okubuyisa umsebenzi wakho olahlekileyo. Jonga izivakalisi ezi-3 ezinamandla zokubuyela emsebenzini ukuze zikuncede kwimfuno yakho yokubuyela emsebenzini wakho wakudala.
1 Imithandazo enamandla ye-3 yokubuyisa umsebenzi
2 Umthandazo wokubuyisa umsebenzi kunye nentethelelo yabangcwele
3 Umthandazo wokubuyiselwa komsebenzi kunye nokuthethelela kukaSan Antonio
4 Umthandazo wokubuyiselwa komsebenzi kunye nokuthethelela kukaSt
Jonga kwakhona omnye umxholo wovelwano, amasiko kunye nemithandazo el mundo Umsebenzi:
Umthandazo wokubuyisa umsebenzi kunye nentethelelo yabangcwele
Owu! Mama othandekayo Inenekazi lethu uAparecida Owu Rita oyiNgcwele waseCassia Owu luzuko lwam Ongcwele uJude Thaddeus, umkhuseli wezizathu ezingenakwenzeka. USanto Expedito, ingcwele yomzuzu wokugqibela kunye no-Saint Edwiges, ingcwele yabasweleyo engenelela noBawo ngenxa yam (ndinike igama lakho elipheleleyo) Ndiyamcela ukuba andincede ndibuyele emsebenzini wam ukuze baphinde banditsalele umnxeba, ngokungxamisekileyo. Ndiyakuzukisa kwaye ndikudumise njalo ndiya kuqubuda kuwe. Thandaza: 1 Bawo wethu kunye neentaka zaselwandle ezi-3 ndiyamthemba uThixo ngamandla am onke ndize ndimcele akhanyisele indlela yam nobomi bam, Amen.
Thetha lento ukuthandazwa kwiintsuku ezintathu zilandelelana, ukuba kunokwenzeka ngaxeshanye. Khetha indawo ethe cwaka neyoxolo apho ungasayi kuphazanyiswa, khona ukuze ukwazi ukujolisa ngokupheleleyo kwinjongo yakho ngendlela elungileyo kunye ukholo kunye nokuqiniseka ukuba olu lubabalo luya kufezekiswa.
Umthandazo wokubuyiselwa komsebenzi kunye nokuthethelela kukaSan Antonio
«Ukuba ufuna imimangaliso, Yiya eSan Antonio, uyakubaleka umtyholi Kunye nezilingo ezingapheliyo. Ukubuyisa elahlekileyo Ikhefu elinzima lentolongo, Kwaye ekuphakameni kwenkanyamba Yiya elwandle olusenkingeni. Ngokuthethelela kwakho Isibetho, impazamo, ukufa Uyabaleka, Ababuthathaka bomelele kwaye bagule basempilweni. Buyisa oko kulahlekileyo ... (phinda-phinda kathathu) Bonke ububi babantu Bumodareyitha, buyela umva, Sixelele ukuba ngubani na okhe wabona; Yitsho iPaduan. Buyisa oko kulahlekileyo ... (phinda amaxesha ama-3) Uzuko kuYise, uNyana noMoya oyiNgcwele. Njengoko kwakunjalo ekuqaleni, ngoku kwaye njalo Amen. Buyisa oko kulahlekileyo… (phinda-phinda kathathu) V. Sithandazele, OyiNgcwele u-Anthony. A. Sangafanele izithembiso zikaKrestu. Phinda ufumane oko kulahlekileyo… (phinda amaxesha ama-3) Thandaza uBawo Wethu kwaye Bhekisa uMariya.
Thetha lento ukuthandaza mihla le okanye njengoko kufuneka, kwaye ukhanyise ikhandlela lombulelo ku-Anthony Anthony xa ubabalo lufezekisiwe. U-Anthony Anthony yeyona Ngcwele ekufuneka siyicelele into elahlekileyo, ukuze nawe ukwazi ukuyisebenzisa le nto Umthandazo wothando, injongo, imali okanye nayiphi na imeko ekufuneka iphinde yafunyanwa.
Umthandazo wokubuyiselwa komsebenzi kunye nokuthethelela kukaSt
“USanto Antonio ngumthi waseMandingo, iSanto Onofre ngumthi waseMirongueiro. Owu, owam oyingcwele waseCypriot ... umntu omnyama okwaziyo ukukhafula kakuhle.Yenze uthe cwaka, uthetha kancinci kwaye uyageza! ”San Cipriano, enkosi. Ukuba kungenzeka ukuba mna (nditsho igama lakho elipheleleyo) ndiwufumane umsebenzi endiwufunayo (yitsho igama lenkampani yakho) inkulu kune bangaphi abantu abaya kufunda lo myalezo! USaint Cyprian, umlumbi kunye nomKrestu, olilungisa nongendawo, onolwazi nobalaseleyo kubugcisa bakhe bezenkolo, ndibiza kuwe ngentliziyo yam yonke, umzimba, umphefumlo kunye nobomi ukufezekisa injongo yokubuyisa lo msebenzi (yitsho igama lenkampani). Ndicela yonke imikhosi ephezulu yoBathathu Emnye oyingcwele, imikhosi yolwandle, umoya, umlilo, indalo kunye nendalo iphela ukwenza lo msebenzi uwele ezandleni zam kwaye uboshwe ndim (yitsho igama lakho elipheleleyo). Wanga lo msebenzi (yithi igama lenkampani) ube ngowam ngonaphakade, ukuba phantsi kwala MANDLA ONGCWELE lo msebenzi awunakuba ngowamntu ngaphandle kwam (yitsho igama lakho elipheleleyo). Vumela igosa eliqeshayo lingaboni abanye abaviwa ngaphandle kwam (chaza igama lakho elipheleleyo). Ngethuba nje umphathi oqeshayo engandibizi (xela igama lakho elipheleleyo) ukukuxelela ukuba lo msebenzi ngowam, ngekhe bonwabe kwaye ngalo lonke ixesha besiva igama lam (xela igama lakho elipheleleyo) baya kuqiniseka ukuba ndim umntu endinokunxibelelana naye . Umsebenzi webhokhwe engummangaliso okhwele endulini, undizisele umsebenzi (masithi igama lenkampani) endilifunayo nendikulangazelelayo. Makube njalo, kuya kwenziwa, kuya kwenziwa. Ndiyakholelwa kwaye ndiza kuba nawo umsebenzi endiwufunayo kum (ndinike igama lakho elipheleleyo) ngonaphakade ”.
Oku Umthandazo unamandla kakhulu kwaye kufuneka yenziwe ngexesha Iintsuku ezi-3 ngexesha elifanayo kunye nokholo olukhulu kunye ne-positivity! Thatha imizuzu embalwa yokucinga ngobomi bakho kule nyaniso intsha, ngalo lonke ulonwabo lokubuyela emsebenzini okudala kuya kukuzisela. Ukuba uzimisele ngokwenene ukubuyela emsebenzini wakho wakudala yeyona ndlela ilungileyo, jonga amasiko emi-4 yesiphukuphuku ukuze ufumane umsebenzi kwakhona kwaye uqhubeke nokuqinisa isicelo sakho.